Grace Mugabe, the wife of former Zimbabwean ruler Robert Mugabe, has been accused of attacking an employee at the family's home with a shoe in 2017, lawyers said Tuesday. She also faces an arrest warrant in neighbouring South Africa for her alleged assault with a power cable on a female model in Johannesburg in the…
Botswana has offered to lend Zimbabwe $600 million to support its diamond industry and local private firms, a state-owned newspaper reported on Tuesday, amid a severe dollar crunch in the southern African nation.
Zimbabwe opposition figure fined for claiming poll win
A Zimbabwe court Monday convicted leading opposition figure Tendai Biti of an election crime and fined him for announcing his own results for presidential polls last July, which he claimed he won.
Zimbabwe's government has pledged to "thoroughly" investigate allegations of abuse and rape levelled against its security forces during a brutal crackdown to crush last week's anti-government protests. Nationwide demonstrations erupted last week after President Emmerson Mnangagwa announced on January 12 that fuel prices were being more than doubled in a country suffering from spiralling inflation…
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa vowed Tuesday to investigate security forces over their brutal crackdown on protesters, as he scrambled to fend off international criticism and restore order on his return to the country.
A crackdown by security forces has been fiercely criticised by the UN human rights office, with allegations of shootings, beatings and abductions of opposition figures, activists and ordinary residents.
Zimbabwe president says 'monumental task' to fix economy
Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa on Wednesday called for calm as he vowed to tackle the "monumental task" of fixing the shattered economy that has sparked violent protests this week.
Fuel hike sparks protests in Zimbabwe
Commuters were stranded in Zimbabwe’s two main cities Monday as angry protesters reacting to the weekend more than doubling of fuel prices, burned tyres and used rocks to barricade roads and blocked buses from carrying passengers.
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa has announced an sharp increase in fuel prices in a measure to improve supplies as the country struggles with its worst petrol shortages in a decade.
Ailing Mugabe now unable to walk, says Zimbabwe president
Zimbabwe's ex-leader Robert Mugabe is in Singapore for medical care and now unable to walk because of ill health and old age, President Emmerson Mnangagwa said on Saturday. Mnangagwa told his ZANU-PF party supporters at a rally that the 94-year-old Mugabe had been receiving medical care in Singapore for the past two months. "He (Mugabe)…
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa and members of his cabinet received doses of Oral Cholera Vaccine (OCV) to encourage people in areas being targeted by health officials to get vaccinated, state media reported on Wednesday.
Ndukuba opens management course, charges senior clergy to walk and work with God
The Primate of the Church of Nigeria, The Most Rev. Henry Ndukuba, has called on the senior clergy of the Church to partner God to transform the society.
Moses, Troost-Ekong Among Africa’s Best 11 At AFCON
Following the conclusion of the TotalEnergies Africa Cup of Nations (AFCON), Cameroun 2021 Group Stage, the Technical Study Group (TSG) has released their Best of the Group Stage.
NSCDC parades 17 suspected oil thieves in rivers
The Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC), Rivers State Command, has paraded 17 suspected oil thieves. The Guardian gathered that the NSCDC General Special Intelligence Squad...
Nigeria, Brazil set for exhibition, culture promotion in March
Consul General, Consulate General of Brazil, Francisco Carlos Soares Luz, has raised the need to promote and encourage cultural exchange between Nigeria and Brazil,
We won’t disappoint, Akpeyi assures of Eagles victory
Sixteen years ago, when Coach Augustine Eguavoen led the Super Eagles to the Africa Cup of Nations (AFCON) in Egypt, one of his biggest challenges came from Tunisia.